ndedzipi mhemberero dzescrum mukukasira?
Kuru Agile Ndeapi Mhemberero dzeScrum Mune Agile?
Scrum ine mhemberero ina huru dzinounza chimiro kune yega Sprint:
Kuronga kweSprint: Musangano wekuronga timu uyo ​​unotarisa zvekupedzisa mune inouya sprint.
Mazuva ese kusimuka: Iyo inozivikanwa zvakare seye zuva nezuva scrum, maminetsi gumi nemashanu-musangano weiyo timu timu kuenzanisira.
Demo rekumhanya: Musangano wekugovana uko timu inoratidza izvo zvavakatumira mune iyo sprint.
Shanduro yekudzoka shure: Kuongororwa kwezvakaitwa uye zvisina kufamba zvakanaka nezviito zvekuita kuti inotevera sprint ive nani.
Chinangwa cheSprint Planning mhemberero ndeyekuseta timu yese kuti ibudirire mukati mechisimba chese.
Vadzidzi vanodiwa ndevaya:
Iyo yekumhanyisa kuronga inoitika inguva iyo iyo sprint isati yatanga uye kazhinji inotora imwe kusvika kumaawa maviri.
Kuuya mumusangano, muridzi wechigadzirwa anozove nerondedzero yezvinhu zvakasarudzika zvechigadzirwa.
Muridzi wechigadzirwa anokurukura chinhu chimwe nechimwe kana nyaya yemushandisi neboka rekuvandudza, uye boka pamwe chete rinofungidzira kuedza kwakabatanidzwa.
Dare rebudiriro rinobva raita fungidziro, inowanzoenderana nevelocity yechikwata, ichitsanangura kuti ibasa rakawanda sei iro timu inogona kupedzisa kubva kubhizimusi rekuseri kwechigadzirwa. Mutumbi webasa ipapo unobva wave iko kuseri kwekusara.
Ko Kanban ine Sprint Planning Ceremony?
Hongu, zvikwata zveKanban zvinorongawo, asi ivo havasi pane yakasarudzika iteration chirongwa pamwe neyakagadziriswa sprint kuronga.
Sprint Kuronga uye Nhau Kunatsiridzwa
Mamwe masangano anoshandisa musangano wekuronga kwekumhanyisa kuita nyama nhoroondo yeumwe neumwe mushandisi nyaya. Muchokwadi, zvinokurudzirwa kwazvo kuti vese vatori vechikamu vanoita nhaurirano dzinoshanda kuitira kuti munhu wese anzwisise kukura kwebasa.
Mamwe masangano ane zvikamu zvakasiyana zveKunatsurudzwa kwenhau kwavanokurukura ruzivo rweyenyaya yega yega pamwe nekufungidzira kwakaipa kwekuti ibasa ripi rinobatanidzwa mukuendesa nyaya. Kazhinji nyaya dzinoputswa kuita mashoma emabasa madiki.
Nekuve neaya akapatsanurwa enhau nyaya yekunatsiridza, kazhinji pamberi peiyo inotevera sprint, iyo yekumhanyisa kuronga chikamu inova ipfupi mukureba uye inovavarira kungogamuchira nyaya mune irikuuya sprint.
Mazuva ese Simuka-kumusoro
Musangano wezuva nezuva wekumira wakagadzirirwa kukurumidza kuzivisa munhu wese nezvezviri kuitika kuyambuka timu. Izvo hazvifanirwe kuve zvakadzama mamiriro emusangano.
Izwi rinofanira kunge rakareruka uye rinonakidza, asi rinodzidzisa. Ita kuti nhengo yega yega yechikwata ipindure mibvunzo inotevera:
Chii chandakapedza nezuro?
Ndichashanda nei nhasi?
Ini ndakavharirwa nechinhu here?
Iko kusimuka kwemazuva ese kunoitika kamwe pazuva, kazhinji mangwanani uye zvinoda kuti timu yekusimudzira, ScrumMaster, uye Muridzi weChigadzirwa vapinde.
Zvinokurudzirwa kuti nguva yacho haipfuuri maminetsi gumi neshanu, saka chinangwa chekumira kuti musangano ufupike.
Imwe yemabhenefiti emusangano wezuva nezuva wekumira-kumusoro ndeyekuti zvinoita kuti vanhu vacho vave vechokwadi kwavari.
Pane kuzvidavirira kwakazara mukumhan'ara basa ripi rawakapedza nezuro pamberi pevezera rako. Hapana munhu anoda kuve nhengo yechikwata iyo inogara ichiita chinhu chimwe chete uye isingafambire mberi.
Zvikwata zvinogoverwa zvinowanzoshandisa musangano wevhidhiyo kana hurukuro yeboka kuti vhara chinhambwe.
Pakupera kwekumhanya, timu yega yega inosvika kudemo kana kuratidzira maficha avo achangogadzirwa kana kungoita zvavaishandira panguva yesprint.
Ino ndiyo nguva yechikwata kupemberera zvavakaita, kuratidza basa rapera mukati meiyo iteration, uye kuwana mhinduro pakarepo kubva kune vanobata basa.
Iyo nguva inogona kusiana pane huwandu hwezvinhu zvekuratidzira nechikwata.
Basa racho rinowanzooneswa kune vatori vechikamu vechikwata chakanangana, rinova timu rekusimudzira, ScrumMaster, uye Muridzi weMiti pamwe nezvimwe zvikwata uye vanobata chirongwa.
Kuti demo riite chero kukosha uye kufarira kune vamwe, iro basa rinofanira kuve zvizere kuratidzira uye unosangana nechikwata chemhando yechikwata kuti chionekwe chakakwana uye chakagadzirira kuratidzira mukudzokorora.
Chigadzirwa Demo chinoshanda kuna Kanban?
Kufanana nekuronga, ongororo yezvikwata zveKanban zvinofanirwa kuenderana nematanho echikwata kwete pane yakasarudzika cadence.
Uye pakupedzisira kuenda kune iyo sprint retrospective inoitika kumagumo eiyo sprint, kazhinji mushure meye sprint demo uye inopedza ingangoita awa rimwe chete. Vatori vechikamu iboka rekuvandudza, ScrumMaster, uye Muridzi Wezvigadzirwa.
Agile iri pamusoro pekuenderera mberi nekuvandudza uye kuwana inokurumidza mhinduro kuita kuti chigadzirwa uye budiriro tsika ive nani.
Retrospectives anobatsira timu kunzwisisa izvo zvakashanda mushe- uye chii chisina.
Kuenderera mberi kwekuvandudzwa ndiko kunotsigira uye kunotyaira kusimudzira mukati mechikwata chinonamira, uye kudzokorodza chikamu chakakosha cheizvozvo .
Sprint retrospectives haifanire kunge iri yekuitira zvichemo chete pasina kutora matanho.
Retrospectives inzira yekuziva zviri kushanda kuti timu irambe ichitarisa kunzvimbo idzodzo uyezve zvisiri kushanda kuti timu ikwanise kukurukura nekubatana kutsvaga mhinduro dzekugadzira kumatambudziko.
Ko Kanban ine zvakare Sprint Retrospective?
Scrum zvikwata zvinomhanya zvichidzosera kumashure zvichibva pane yakatarwa cadence. Hapana chinomisa zvikwata zveKanban kuti zvibatsirwe kubva pane dzimwe nguva kudzokorodza, futi.
samsung noti 8 yakajeka kesi
Apple inotanga iSight kamera chinja chirongwa cheimwe Apple iPhone 6 Plus zvikamu
Ehe, iwe unogona kudzima akawanda masheya maapplication muIOS 10: apa & apos; s runyorwa newaunogona kubvisa nawo
Maitiro ekuvhara (uye kudzivirira kupinda) kune ega mapurogiramu paApple